कसरी थाहा पाउने युरिक एसिड ? यस्ता छन् थाहा पाउने उपायहरुः – mero sathi tv
कसरी थाहा पाउने युरिक एसिड ? यस्ता छन् थाहा पाउने उपायहरुः
On २९ चैत्र २०७४, बिहीबार १४:२०
शरीरभित्र पिउरिन भन्ने प्रोटिन टुक्रिएर युरिक एसिड उत्पादन हुन्छ । सामान्यतः ३ देखि ७ मिलिग्राम–डेसिलिटरसम्मको युरिक एसिड नर्मल मानिन्छ । जब युरिक एसिडको मात्रा ७ भन्दा बढी हुन्छ, त्यसलाई युरिक एसिड बढेको भनिन्छ ।
यसरी युरिक एसिड बढेपछि सामान्यतः खुट्टाको बुढीऔँलाको छेउमा अचानक दुख्ने तथा सुन्निने समस्या हुन्छ । राति सुत्ने वेलामा सामान्य अवस्थामा रहेको मानिसको पनि बिहान उठ्दा नाटकीय रूपमा दुख्ने र सुन्निने भई खुट्टा टेक्न गाह्रो हुन्छ ।
युरिक एसिडका बिरामीले विशेषगरी रेड मिटको सेवन गर्नुहुँदैन । माछा र मासुको प्रयोग पनि निकै कम मात्रामा गर्नुपर्छ ।
चना, भटमास, राज्माजस्ता गेडागुडी सकेसम्म खानुहुँदैन । टुसा उम्रेका गेडागुडी पनि प्रयोग नगर्दा राम्रो ।
अत्यधिक गुलिया फलफूल र परिकार पनि प्रयोग गर्नुहुँदैन । आँप, अंगुर र गुलियो मिठाईले युरिक एसिड बढाउन भूमिका खेल्छ ।
बजारमा उपलब्ध पेयपदार्थको पनि प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ । त्यस्ता पेयपदार्थमा चिनीको मात्रा बढी हुन्छ । जसबाट फ्रुक्टोज नमक तत्व पनि हुन्छ । जसले युरिक एसिड बढाउन सहयोग गर्छ ।
अल्कोहलिक पेयपदार्थलाई भने पूर्ण रूपमा निषेध नै गर्नुपर्छ । बियर, ह्विस्की लगायतका पेयपदार्थले भन्दा वाइनले भने कम हानि पुर्याउँछ ।
युरिक एसिडका बिरामीले दुग्धजन्य पदार्थको भने प्रयोग गर्दा हुन्छ । अमिलो कागती, भेनेगर, ग्रिन टी, कफीको पनि प्रयोग गर्दा कुनै फरक पर्दैन । किनभने, यस्ता पदार्थले युरिक एसिड घटाउन सहयोगी भूमिका खेल्छ ।
काउली, ब्रोकाउली, कुरिलो र पालुंगोमा पनि युरिक एसिडको मात्रा बढी हुन्छ । तर, यस्ता तरकारी प्रयोग नै नगर्नेचाहिँ होइन । मात्रा मिलाएर हरियो तरकारी खाँदा हानि पुर्याउँदैन
६ महिने गर्भवती गायिका उभिएर गीत गाउन नसकेपछि गोली हानी हत्या
यी हुन् हाँसो थाम्न नसकिने पाँच तस्वीर